को हुन काठमाडौ महानगरमा एमालेले उपमेयर उम्मेद्वार बनाएको सुनिता डंगोल ? « हाम्रो ईकोनोमी
को हुन काठमाडौ महानगरमा एमालेले उपमेयर उम्मेद्वार बनाएको सुनिता डंगोल ?
देशको सर्वाधिक चासो रहेको संघीय राजधानी काठमाडौको मेयरमा सधैं चर्चामा रहेका केशव स्थापितलाई एमालेले उम्मेद्वार बनायो । यसमा अधिकांसको सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको छ । तर उपमेयरकी उम्मेद्वार सुनिता डंगोलको नाम कमैले मात्र सुनेका थिए । डंगोलको नाम उपमेयरमा आएपछि धेरैले को हुन् भनेर जिज्ञासा राखेका छन् । डंगोलको संक्षिप्त परिचय हामीले हामीले यसरी प्रष्तुत गरेका छौं ।